DialogTech: Oku oku na Ntụgharị ntụgharị | Martech Zone
Tupu smartphones na ekwentị mkpanaaka, mgbe ahịa dijitalụ bụ desktọọpụ pasent 100, njiri mara ya dị mfe. Onye na-azụ ahịa pịa mgbasa ozi ụlọ ọrụ ma ọ bụ email, gaa na peeji nke ọdịda, ma dejupụta mpempe akwụkwọ ka ọ bụrụ onye ndu ma ọ bụ mezue zụọ.
Ndị na-ere ahịa nwere ike kegide ụzọ ahụ ma ọ bụ zụta ya na isi iyi ahịa ziri ezi wee tụọ nloghachi na mmefu maka mkpọsa na ọwa ọ bụla. Naanị ihe dị ha mkpa bụ iji nyochaa mmetụ niile iji chọpụta uru ọwa ọ bụla nwere, na ha nwere ike ịkwalite mmetụta ha na ego ha nwetara site na itinye ego na ihe na-arụ ọrụ na iwepu ihe na-adịghị. CMO nwekwara ike iji obi ike chebe mmefu ego ya n'aka onye isi ọrụ site na igosipụta mmetụta ọ na-enweta na ego ha nwetara.
Mana n'uwa mbu nke ugbua, ebe otutu ndi ahia na-agbanwe site na ikpo oku, inwe oke ihe kariri nsogbu - obughi na ichoputa ebe oku a di, ma na ihe esi na ya puta. Ijeri ekwentị ndị a na-akpọ kwa ọnwa na-ada n'èzí n'echiche nke ọtụtụ ngwaọrụ ahịa, na -emepụta nnukwu oghere n'ime ahịa ndị na-ere ahịa data na-adabere na iji gosipụta ROI ma melite ọgbọ ego. Nke a data banyere akakabarede site na oku na-aga na-efu ruo mgbe ebighị ebi. Data a nwere ike ịgụnye:
Isi iyi ahia nke oku: Kedu ekwentị mkpanaaka, dijitalụ, ma ọ bụ nke na-anọghị n'ịntanetị nke mere ka oku ahụ - gụnyere mgbasa ozi, mkpọsa, na ọchụchọ isiokwu - yana ibe weebụ ọ bụla na ọdịnaya dị na saịtị gị nke onye na-akpọ oku lere anya na mgbe ọ kpọchara.
Oku data: Kedu onye na-akpọ oku ahụ, nọmba ekwentị ha, ọnọdụ ala ha, ụbọchị na oge ịkpọ oku, na ndị ọzọ.
Ofdị oku: Gịnị bụ ebumnuche onye na - akpọ oku - ọ bụ ọkpụkpọ ahịa ma ọ bụ ụdị ọzọ (nkwado, HR, ịrịọ arịrịọ, misdial, wdg)?
Oku pụta na uru: Ebee ka ebugoro ọkpụkpọ ahụ, ogologo oge mkparịta ụka ahụ, ihe ekwuru na oku ahụ, ma ọ bụrụ na oku ahụ gbanwere bụrụ ohere ahịa ma ọ bụ na ego ha ga enweta (na etu ma ọ bụ uru nke ohere ahụ).
Onwere maka oku ekwentị bụ ihe ịma aka kachasị eche ihu ndị na-ere ahịa data na-agba taa. Na-enweghị ya, ndị na - ere ahịa enweghị ike ịlele ahịa ROI ma bulie ego maka ihe na - eduga na ntinye ego. Ọzọkwa, ndị na-ere ahịa enweghị ike iji obi ike chebe mmefu ego na CEO. Na nkenke, oghere ojii na-etinye ndị ahịa ahịa nrụgide ka ukwuu iji chebe ọnụ ahịa ha ma na-efu ndị ahịa azụmaahịa.
“Inbound ekwentị oku bụ otu n’ime ihe ndị kasị ike na-azụ egosi na ọ bụla ahịa njem. DialogTech na-enyere ndị otu ụlọ ọrụ na ụlọ ọrụ na-azụ ahịa ka ha nwee ike ịkwalite mkpọsa dijitalụ maka ịkpọ ndị ahịa site na iji otu ụzọ azịza na usoro ha jiri mee ihe maka clicks. ” - Irv Shapiro, onye isi oche, Mkparịta ụka
Mkparịta ụka na-eje ozi dị ka onye mmekọ dị mkpa maka ụlọ ọrụ 5,000, ụlọ ọrụ, na ụlọ ọrụ na-eto ngwa ngwa gafee ọtụtụ ọrụ. Ndị ahịa ugbu a gụnyere Ben & Jerry's, HomeFinder.com, Ndị Nkasi Obi, Terminix, nwere usoro ojiji atọ dị mkpa F5 Mgbasa ozi, Ụlọ nkwari akụ, na Centlọ Ọrụ Mattra Trainra na-ehi ụra.
Na-eji nsuso oku dị irè na njiri mara na nsụgharị ntụgharị, ndị ahịa nwere ike ibuli mgbasa ozi ọchụchọ AdWords na Bing ịchụpụ ọ bụghị naanị oku ọzọ, mana ndị ahịa na ego ha nwetara:
Jiri Ndekọ oku na ọkwa iji gosipụta ma melite ROI: Ghọta kpọmkwem otu esi akwụ ụgwọ ọchụchọ gị na-akwalite oku, wee bulie isi okwu, mgbasa ozi, ibe ọdịda, ọnọdụ, na ụbọchị / oge na-akwalite oku ndị ahịa (ma kachasị mma).
Calzọ na-akpọ oku dabere na oku Ndepụta Data: Jiri oku nsuso data weghaara na oge nke oku na-aga ọ bụla bere ubé optimally, na-ha ka ha kasị mma onye na-atọghata ha ka ha na-ere. Kpọọ teknụzụ nwere ike ịbugharị ndị na-akpọ oku na oge dabere na nhọrọ dị iche iche, gụnyere isi iyi ahịa (isi okwu, mgbasa ozi, na ibe ọdịda), oge na ụbọchị, ebe onye na-akpọ oku, na ndị ọzọ.
Nyochaa Mkparịta ụka iji meziwanye PPC: Jiri mkparịta ụka nchịkọta teknụzụ iji hụ ma ndị na-akpọ oku akwụ ụgwọ jiri ọdụ ogologo gị ma ọ bụ isiokwu ndị ọzọ, otu ha si akọwa isi ihe mgbu ha na azịza ha nwere mmasị na ya, na ndị ọzọ. Nwere ike iji ihe ọmụma ahụ gbasaa ma ọ bụ mezie-na-akụ ụda isiokwu na-eme ka mgbasa ozi na ọdịda peeji nke ozi dịkwuo irè.
Ihe ngosi DialogTech na-edozi otu n'ime nsogbu ndị kachasị emetụta n'ụwa nke ugbu a site na iwepu oghere ojii na data arụmọrụ ahịa site na oku na-abata. Dika ndi ahia chere ihu na ebili elu ka obia obughi soso gha enweta ego, okwu a nke DialogTech n’enye ndi n’ere ahia ikike ichota ihe ha gha acho iji tinye obi ha na akpo oku, ya na teknụzụ ntughari nke di nkpa iji gbanwee ndi n’azu n’ime ndi ahia. Ọ bụ aha njirimara na teknụzụ ntụgharị nke ewuru kpọmkwem maka ndị na-ere ahịa na-arụ ọrụ maka oku na ebe ọ bụla ma enwere ike iji ya - ma ọ bụ na - enweghị onwe ya - ụlọ ọrụ ịkpọ oku.
Njedebe na njedebe njedebe njirimara data: Ihe karịrị nnọọ nsuso oku. Nanị ihe ngwọta na-agwa ndị na-ere ahịa otu mkpọsa ha si eme ka ndị ahịa kpọọ ha, ma ọ bụrụ na oku na-agbanwe gaa ahịa, na ihe kpatara ya - imechi akaghị n'etiti dollar ejiri na dollar akwụ.
Ezigbo oge ịkpọ teknụzụ: Nanị ihe ngwọta maka ndị na-ere ahịa na-ejikwa ịghagharị ma hazie ahụmịhe oku ọ bụla na oge, na-eme ka onye ọkpụkpọ ọ bụla jikọọ ozugbo na onye kachasị mma iji tọghata ha na ire ere.
DialogTech ebuputara ya Isi mmaliteTrak ™ 3.0 - Ngwọta nyocha nsuso na mbụ akpọrọ iji mezuo data, nnweta, ntụkwasị obi na ịdị mfe ntinye nke ụlọ ọrụ Fortune 1000, nnukwu ụlọ ọrụ ọtụtụ ebe na ụlọ ọrụ azụmaahịa ha na-arụ ọrụ.
Na mgbakwunye na SourceTrak 3.0, DialogTech amalitela ihe ngwọta ndị a na 2015, na-enwekwu ike Voice360® n'elu ikpo okwu:
SpamSentry ™ Spam Call Mgbochi: Nanị ihe ngwọta na ụlọ ọrụ na-akpọ oku na-arụ ọrụ nke na-agbanwe agbanwe, teknụzụ na-amụ igwe na-akwụsị aghụghọ na oku achọghị tupu ha eruo otu ụlọ ọrụ ahịa nke ụlọ ọrụ. Ochie na-egbochi spam call data ịpụta na nchịkọta na ndị ahịa ahụ dabere na ịlele arụmọrụ nke mkpọsa ahịa mkpanaka. Akụkụ ndị dị na ya gụnyere: Netwọk ntanetị, nke na-agbanwe agbanwe maka spam ọhụrụ, na teknụzụ igodo. Gụkwuo na:
DialogTech maka Ahịa Ahịa: Ngwọta ahịa azụmaahịa mbụ na naanị maka nsuso, ịchịkwa, na ịchekwa oku ndị ahịa na mgbasa ozi ekwentị Ihe ngwọta a na-enyekwa ndị na-ere ahịa ihe kachasị mma isi okwu-larịị ịkpọ aha data maka ndọtị oku Google. Yana ịkpọku Attribution, ọzọ ike na-agụnye: Contextual oku na-aga aga ụzọ, Mkparịta ụka Insight oku na ndekọ na- nchịkọta, na njikọta iji tinye onye na-akpọ mgbasa ozi nchịkọta data na martech na ngwa adtech iji melite arụmọrụ mkpọsa.
LeadFlow ™ maka Ego-Kwa-Kpọọ: Ntugharị oku kachasị elu, njiri mara, na njikwa njikwa wuru maka mkpọsa ịkwụ ụgwọ. LeadFlow na-enye ndị mmekọ na ndị na-ere ahịa arụmọrụ zuru oke na ebe a na-eziga ekwentị site na ọwa ahịa ọ bụla, nke na-akpọ ka a gụọ dị ka ezigbo nduzi, na ọtụtụ ndị ọzọ.
Tags: Kpọọ nchịkọtaịkpọ ahaoku na-atụgharịkpọọ nsonaazụuru urudata okuntughari ntugharimkparịta ụkaEbe ahia ahia okuụdị oku